बिचरा ! २० बर्षे युवतीले गरिन् यस्तो काम, स्वर सुन्दा सबै छक्क परे (भिडियो सहित)
Homeसमाचारबिचरा ! २० बर्षे युवतीले गरिन् यस्तो काम, स्वर सुन्दा सबै छक्क परे (भिडियो सहित)
April 13, 2021 admin समाचार 2922
एक गरिब परिवारमा जन्मिएकी रोदा राई जसको आवाजमा छुट्टै किसिमको जादु सुनिन्छ । पहाडको एकलास अनि खोलाको नजिकैमा उनको घर रहेको छ । घरको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको परिवारमा बिचरा कलिलै उमेरमा सम्पुर्ण जिम्मेवारी बोकेकी रोदा राईले निकै मीठो गित गाउछिन ।
उनले गाएको गित सुनेर सबै चकित हुन्छन । जादुमय स्वरकी धनी रोदाले बिहानैदेखि खोलाभित्रको ढुङ्गा निकालेर एक ठाउमा भेला गरेर थुपारेर बिक्री गरेर घर परिवार र आमाबुबा पाल्छिन ।
आज सुपर अनलाइन टिभीको टिम उनले ढुङ्गा टिप्ने काम गर्दै गरेको खोलामै पुगेर केहि कुराकानी अनि उनको प्रतिभा युटुबमा सुपर अनलाइन टिभिमा राखेको छ । सुपर अनलाइन टिभिका प्रस्तोता समीर सुवेदीले गरेको कुराकानीमा रोदाले आफ्ना दुख सुख अनि सम्पुर्ण कथा सुनाइन ।
उनका बुबाले आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण आफुले छोरिको गायिका बन्ने सपना पूरा गर्न नसकेको बताउदै आँसु झारेका थिए । उनलाई सल्लाह सुझाब अनि केहि सहयोग गर्न चाहनेले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । बोल्दा बोल्दै एक्कासि रुन थालेकी रोदाले मनै छुने गितहरु एकपछी अर्को गर्दै यसरी सुनाइन ।
तलको भिडियोमा हेर्नुहोला आँसु आउनेछ ।
के चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा गहिरो प्रे’ममा छन् ? (भिडियो सहित )
प्रकाश सुवेदी जे’ल जालान् ? शिल्पा पोखरेलले दिइन् यति धेरै ठाउँ उ’जुरी (भिडियो हे’र्नुहोस्)
मदनकृष्ण श्रेष्ठसहित परिवारका पाँच जनामा कोरोना सं’क्रमण
April 19, 2021 admin समाचार 2978
कलाकार म’दनकृष्ण श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। श्रेष्ठसहित उनका परिवारका पाँच जनामा सोम’बार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। श्रेष्ठले आफू’सहित परिवारका सदस्यहरूमा संक्रमण देखिएको फेसबुकमार्फत् जानकारी गरा’एका छन्। मलगायत छोरा, छोरी, बुहारी र नातिनी पाँचै
भाइरल डोजर वालिको चम्कियो भाग्य ,रातारात आयो यस्तो प्र’स्ताव
April 10, 2021 admin समाचार 3285
भिरपाखा मा डो’जर चलाउने साहसी महिला करुणा अहिले मिडियामा आएकी थिइन्। हेर्दा उनि जति सुन्दर देखि’न्छिन त्यो भन्दा धेरै उनको उनको दुख छ। धेरै पैसा कामाई आफ्नो बुबा आमा लाई सुख दिन्छु भनेर लागेकी क&रुणाले
January 29, 2021 admin समाचार 6079
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (215263)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (207026)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (206683)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (205586)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (204384)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (203620)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (201865)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (201710)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194014)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (170801)